Tamin'ny andro taloha, ny raiben'ny raibentsika dia naminavina ny fijinjana arakaraka ny toetr'andro tamin'ny Paska, nahatsapa ny hamaroan'ny taona sy ny lohataona mafana. Ny fankalazana ny Paska dia natomboka tamin'ny sabotsy masina. Ankoatr'izay, mahaliana ny Orthodoksa sy ny Katolika izany.
Nandeha tany am-piangonana ny mpino, nandray anjara tamin'ny fotoam-pivavahana, nandrehitra mofomamy sy loko vita amin'ny paska. Ary avy eo dia tonga ny fotoana hanaovana fivorian'ny mpianakavy, fialantsasatra mamaky ny fifadian-kanina ary fifaliana ho fanomezam-boninahitra ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Fa inona ny zavatra ninoan'ny Paska tamin'ny andro fialantsasatry ny fiangonana ary inona no azo tsikaritra amin'ny ho avy?
Angano sy lovantsofina momba ny Paka
1. Nandritra ny fanaova mofo ny paska dia tsy navela hiteny ratsy sy hiteny amin'ny feo avo. Ny atmosfera tao an-trano dia tokony ho nilamina sy nilamina. Voaresaka fa avy eo ny paska dia ho tsara.
2. Ny mofo vita amin'ny Paska natokana dia dodona ny hitondra an-trano faran'izay haingana. inoana fa iza no voalohany niampita ny tokonam-baravarana tamin'ny pazo - izany sy ny fijinjana vokatra teo am-piandohan'ity taona ity. Nisy mihitsy aza ny fitenenana hoe: "Hitombo haingana ny varimbazaha raha mihazakazaka miaraka amin'ny mofomamy ny tompony." Ny fisamborana ny olon-drehetra dia natao ho lohalaharana amin'ny ambiny amin'ny asa ary mahazo valiny malala-tanana avy amin'ny asany.
3. Tsy fambara tsara ny famakiana lovia ho an'ny Paska. Izany dia nampanantena fahasahiranana amin'ny aretina ara-barotra na amin'ny vatana.
4. Raha misy mangidihidy molotra na volomaso amin'ny andro fialantsasatra - izany dia mariky ny fihaonana ho avy miaraka amin'ny malalany na ny lalao.
5. Ampahany mofomamy tsy hita nandritra ny sakafo Paka dia iraky ny vola haingana sy fanambinana.
Famantarana ny toetrandro ho an'ny Paska
1. Ilay lanitra be orana tamin'ny Fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty dia naminany io fahavaratra mangatsiaka sy manjombona io ihany.
2. Nisy oram-baratra mahery naminavina ny fianjeran'ny varatra nefa tsy nisy orana mialoha. Ranon-driaka, fa tsy misy kotroka sy tselatra, dia famantarana ny loharano "lena".
3. Frosty Easter dia tandindon'ny taona mahavokatra.
4. Rehefa mangatsiaka ivelan'ny varavarankely, fa ny mari-pana dia mihoatra ny aotra, tokony antenainao ny volana fahavaratra maina. Raha miempo tanteraka ny lanezy any an-tsaha, dia hamokatra ny fizaran-taona.
5. Toetr'andro malefaka, lanitra tsy misy rahona ary hafanana malefaka amin'ny Alahady - mampanantena fahavaratra mafana sy feno fitahiana, manan-karena amin'ny mofo.
6. Raha ny alina alohan'ny Paska dia feno kintana sy milamina - amin'ny fanala ho avy.
7. Salama tsara tsara aorian'ny fialantsasatra - manamarika ny vanin-taona mafana.
Miarahaba anao indrindra amin'ity fotoana mamirapiratra ity!
Nahoana no ankalazaina amin'ny fotoana samy hafa ny Paska?
Ahoana no fomba hilazana amin'ny ankizy ny Paska?
Nahoana no misy mofo sy penina atody?
59 fangatahana ao amin'ny angon-drakitra novokarina tamin'ny segondra 0,481.